Jarmalka ayaa xiray saddex nin oo reer Suuriya oo looga shakisan yahay inay 'xiriir la leeyihiin IS' - BBC News Somali
Jarmalka ayaa xiray saddex nin oo reer Suuriya oo looga shakisan yahay inay 'xiriir la leeyihiin IS'
Image caption Nimanka la xiray ayaa la sheegayaa in baaritaan uu ku socday bilooyin
Saddex nin oo reer Suuriya ah ayaa lagu xiray waqooyiga Jarmalka iyadoo looga shakisan yahay inay soo direen kooxda IS si ay weerar u qaadaan, ayuu sheegay dacwad oogaha.
Boliiska ayaa lagu soo waramayaa inay heleen "cadaymo badan."
Saddexda nin oo da'dooda ay u dhaxayso 17 iyo 26 - ayaa lagu qabtay hawlgalo la qaaday arroornimadii ee gobolka Schleswig-Holstein iyo Lower Saxony Talaadadii.
Kadib, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Thomas de Maiziere, ayaa wariyayaasha u sheegay in nimanka loo malaynayo inay xiriir la leeyihiin nimankii weeraray Paris bishii November sanadkii hore.
Xafiiska dacwad oogaha ee dowladda federalka ee Jarmalka, ayaa sheegay inaan la hayn amar ay nimanka haystaan ilaa hadda inkastoo ay heleen "xog badan"
Nimanka ayaa la sheegay oo kaliya inay yihiin Mahir al-H, 17, Ibrahim M, 18, iyo Mohamed A, 26 - ayaa la sheegay inay imaadeen Jarmalka iyagoo soo maray Turkiga iyo Gariiga iyagoo wata baasaboor aan sax ahayn.
Image caption Xiritaanka ayaa yimid laba bilood ka dib markii ay dhinteen 10 qof weeraro ka dhacay koonfurta Jarmalka
Baarayaasha ayaa aaminsan in nimanka ay iskood u doorteen inay sameeyaan falka lagu tuhunsan yahay, iyo midka jira 17-ka sano lagu soo tababaray sida loo isticmaalo qoryaha iyo waxyaabaha qarxa markuu joogay Raqqa oo ah magaalo ay IS haysato dalka Suuriya.
Waxay heleen baasabooro been ah, taleefoono mobile ah oo ay ku jiraan borogoraamyo la iskula hadlo iyo lacag dollar ah.
Nimanka ayaa la xiray markii 200 oo boliis iyo ciidamada ammaanka ay hawlgalka ka sameeyeen lix meelood, oo ay ku jirto saddex xero qaxooti.
Baarayaasha ayaa ilaa hadda sheeegay in nimanka ay Jarmalka imaadeen November 2015-tii, iyagoo doonaya "inay qaadaan weerar ay horay u amartay IS ama ay sugaan amar kale" ayay dacwad oogayaasha ku sheegeen hadal ay soo saareen.
Image caption Jarmalka ayaa sheegay in saddexda nin ee la xiray ay keeneen Yurub kooxdii soo galisay dadkii ka danbeeyay weerarkii garoonka Stade de France ee November 2015
Shakiga nimanka ayaa bilawday bilooyin ka hor, waxaana lagu haayay baaritaan ay ku jiraan taleefoonadooda oo la dhagaysto, ayay sheegtay wakaalada wararka ee Jarmalka ee DPA.
Shir jaraa'id, ayuu Mr Maiziere ku sheegay in nimanka ay Yurub keeneen, kooxdii taageertay nimankii qarxiyay garoonka kubadda cagta ee Paris 13 November 2015.
Jarmalka ayaa cabsi badan jirtaa, kadib weeraro isdaba joog ah oo lagu qaaday bishii July ayay sheegtay wariyaha BBC ee Jenny Hill.
Toddobaad gudahii bishii July, 10 qof ayaa dhintay dhowr iyo tobana way dhaawacmeen weeraro isxabadayn, qarax iyo baangad ee koonfurta waddanka.
IS ayay u egtahay inay qayb ka qaadatay laba ka mid ah weerarada ay qaadeen dad magangalyo waydiistay ee Wuerzburgand iyo Ansbach. Labada weerar waa la dilay dadkii weerarka qaaday.
June horaanteedii saddex reer Suuriya oo looga shakisan yahay inay qaadayaan weerar isqarxin ayaa lagu xiray magaalada Duesseldorf.
Dowladda ayaa cadaadis badan saaran yahay si ay u dhinto qaxootiga waddanka soo galaya, in ka badan milyan qof oo magangalyo doonaya ayaa yimid Jarmalka. 2015-tii.